Kushambadzira KweDhijitari Kupi Kudyisa Kwako Kwekutengesa Chitoro | Martech Zone
Kana mabhizinesi ari kuongorora yavo yekutengesa fanera, izvo zvavari kuyedza kuita ndezvekuti vanzwisise chikamu chimwe nechimwe murwendo rwevatengi vavo kuti vaone nzira dzavanogona kuita zvinhu zviviri:
zera - Kana kushambadzira kukwezva kwakawanda tarisiro saka zvine musoro kuti mikana yekukura bhizinesi ravo ichawedzera kupihwa kuti mwero wekushandurwa unoramba wakadzikama. Mune mamwe mazwi… kana ndikakwezva chiuru chemamwe tarisiro neshambadziro uye ndine 1,000% chiyero chekushandura, izvo zvinoenzana kune makumi mashanu evamwe vatengi.
Kutendeuka - Padanho rega rega mune fanera yekutengesa, kushambadzira uye kutengesa kunofanirwa kunge kuri kushanda kuwedzera mwero wekushandura kutyaira akawanda tarisiro kuburikidza nekushandurwa. Mune mamwe mazwi, kana ndikakwezva iwo mamwe chiuru tariro asi ndikakwanisa kuwedzera mwero wekushandurwa kuita 1,000%, izvo zvino zvichaenzana kune vamwe vatengi makumi matanhatu.
Chii chinonzi Chitoro Chekushandisa?
Yekutengesa fanera chiratidzo chekuona cheiyo nhamba yezvingave tarisiro iwe zvauri kusvika nekutengesa uye kushambadzira kukurudzira kweako zvigadzirwa kana sevhisi.
Zvese zviri zviviri kutengesa uye kushambadzira zvinogara zvine chekuita neyekutengesa fanera, kazhinji vachikurukura tarisiro iriko mupombi kutsanangura mashandisiro avanogona kuita kufanotaura ramangwana rezvemari kukura kwebhizinesi ravo.
Nekushambadzira kwedhijitari, kuenderana pakati pekutengesa nekutengesa kwakakosha. Ini ndinoda chirevo ichi kubva kune imwe yangu yandave podcast:
Kushambadzira kuri kutaura nevanhu, kutengesa kuri kushanda nevanhu.
Vako vekutengesa nyanzvi vane hurukuro dzakakosha netarisiro zuva nezuva. Ivo vanonzwisisa zvinonetsa zveindasitiri yavo pamwe nezvikonzero nei kambani yako inogona kunge ichirasikirwa nezvibvumirano kune vanokwikwidza. Pamwe pamwe nekutanga uye sekondari kutsvagisa uye kuongorora, vashambadziri vanogona kushandisa ruzivo irworwo kufambisa yavo yekushambadzira yedhijitari… kuona kuti tarisiro padanho rega re faneli ine inotsigira zvemukati kubatsira iyo tarisiro kutendeukira kune inotevera nhanho.
MaSales Funnel Matanho: MaDhijitari Ekushambadzira Anovapa Sei
Sezvo isu tichitarisa kune ese masvikiro uye makwara isu atinogona kuisa mukati medu akazara ekushambadzira zano, pane chaiwo matanho isu atinogona kuendesa kuwedzera uye kugadzirisa imwe neimwe nhanho yekutengesa fanera.
Kushambadzira uye yakawana midhiya kutyaira kuziva nezve zvigadzirwa uye masevhisi ayo bhizinesi rako rinofanira kupa. Kushambadzira kunogonesa timu yako yekushambadzira kushandisa vateereri vakafanana uye mapoka anotarisa kushambadza nekuvaka ruzivo. Yako yemagariro midhiya timu inogona kuburitsa inovaraidza uye inomanikidza zvemukati izvo zvakagovaniswa uye zvinotyaira kuziva. Chikwata chako chehukama neruzhinji chiri kukanda vanokurudzira uye nhepfenyuro nzvimbo kuti vasvike kune vateereri vatsva uye kuvaka ruzivo. Iwe unogona kutoshuvira kuendesa zvigadzirwa zvako uye masevhisi emubairo wekutyaira kuziva nemapoka emaindasitiri uye zvinyorwa.
Vanhu vari kufarira sei zvigadzirwa zvako kana masevhisi ari kuratidza kufarira? Mazuva ano, ivo vari kugara vachienda kune zviitiko, kutora chikamu mumabhizimusi mapoka, kunyorera kune anobatsira matsamba, kuverenga zvinyorwa, uye kutsvaga kweGoogle matambudziko avanotsvaga mhinduro. Kufarira kunogona kuratidzirwa nekudzvanya-kuburikidza pane kushambadzira kana kutumirwa kunounza tarisiro kune yako webhusaiti.
Kufunga nezvechigadzirwa chako inyaya yekutarisa zvinodiwa, mutengo, uye mukurumbira wekambani yako pamwe nevanokwikwidza. Iyi inowanzo iri nhanho iyo yekutengesa inotanga kuve nechekuita uye kushambadzira inokodzera inotungamira (MQLs) inoshandurwa kuita yekutengesa inokwenenzvera inotungamira (SQLs). Ndokunge, zvingangoita tarisiro dzinoenderana nehuwandu hwevanhu uye firmagraphic profiles izvozvi zvatorwa sevatungamiriri uye yako timu yekutengesa inovagonesa mumikana yavo yekutenga uye kuve mutengi mukuru. Apa ndipo panotengeswa zvine tarenda zvisingaite, kupa kesi dzekushandisa, kupa mhinduro, uye kugogodza chero zvinonetsa kubva kumutengi.
Mune mawonero angu, chikamu chechinangwa ndicho chakanyanya kukosha kubva pakuona nguva. Kana iri yekushandisa yekutsvaga iri kutsvaga mhinduro, iko kusununguka kwaunotora ruzivo rwavo uye kuita kuti vashandi vako vekutengesa vavatevere zvakakosha. Kutsvaga kwavakashandisa kwakapa chinangwa chekuti vari kutsvaga mhinduro. Nguva yekupindura kuti ikubatsire yakakoshawo. Apa ndipo panodzvanya-kufona, mafomu ekupindura, bots bots, uye mabhodhi ehupenyu ari kuita hukuru hwakakura kune huwandu hweshanduko.
Kuongorora ndiyo nhanho yekutengesa inounganidza ruzivo rwakawanda sezvavanogona kuisa tarisiro nyore kuti iwe une mhinduro kwayo. Izvi zvinogona kusanganisira zvirevo uye zvirevo zvebasa, kutaurirana kwemitengo, chibvumirano chetsvuku-kumisikidza, uye kuainira chero rumwe ruzivo. Ichi chikamu chakura pamwe nekutengesa zvinogonesa mhinduro mumakore mashoma apfuura - kusanganisira masaini edhijitari uye zvinyorwa zvekugovana online. Izvo zvakare zvakakosha kuti bhizinesi rako riine mukurumbira mukurumbira online sezvo timu yavo iri kuvaka kubvumirana ichave ichichera mukati nekutsvaga kambani yako.
Maitiro asina musono ekutenga akakosha kune ecommerce kutarisa-kune mutengi zvakanaka sezvazviri kune kambani yebhizinesi. Kugona kubhadharisa nyore nyore uye kuunganidza mari, kutaurirana ruzivo rwepabhodhi, kutumira kutumira kana kutumira zvinotarisirwa, uye kufambisa tarisiro mumutengi kunofanirwa kuve nyore uye kuzivikanwe.
Chii Chisingasanganisirwe Iyo Yekutengesa Yekushandisa?
Rangarira, tarisiro yekutengesa fanera iri kushandura tarisiro kuita mutengi. Izvo hazviwanzo kupfuura izvo kunyangwe hazvo zvemazuva ano zvikwata zvekutengesa uye zvikwata zvekushambadzira zviri kuteerera kune ruzivo rwevatengi uye zvinodiwa nevatengi zvekuchengetedza.
Zvakakoshawo kuti uzive kuti fanera yekutengesa inomiririra kushambadzira kwesangano rako nekutengesa kwechikwata… hazviratidze izvo vatengi chaiko rwendo. Mutengi, semuenzaniso, anogona kuenda nekudzoka mukati merwendo rwavo. Semuenzaniso, tarisiro inogona kutsvaga mhinduro yekubatanidza zvigadzirwa zviviri mukati.
Panguva iyoyo, ivo vanowana muongorori mushumo pamhando yepuratifomu yavari kutsvaga uye vakuone semhinduro inoshanda. Izvo zvakabvisa kuziva kwavo kunyangwe ivo vaitova nechinangwa.
Usakanganwa… vatengi vari kufamba zvakanyanya nekuzvishandira pakuongorora kwavo kwavanotevera kutenga. Nekuda kweizvi, zvakakosha kuti sangano rako riine rakazara rezvinyorwa raibhurari kuti uvatsigire murwendo rwavo uye kuti uvaendese kunhanho inotevera! Kana iwe ukaita rakakura basa, iwo mukana wekusvika zvakanyanya uye kushandura zvimwe zvichaitika.
Tags: b2b yekutengesa fanerakufungaKukoshesachinangwamuberekotengaKugonesa Kugonesasales salesnelzvikamu zvekutengesa fanerasqlchii chinonzi faneli yekutengesa